हुन्डाईमा चर्काे कालाबजारी : एउटै कारमा साढे २१ लाख रुपैयाँसम्म झ्वाम | नेपाल आज
कुन कारमा कति रुपैयाँसम्म ठगिन्छन् खरिदकर्ता ? (सूचीसहित)
बिहिबार, २९ भदौ २०७४ गते मा प्रकाशित
काठमाडौं । नेपालमा कार चढ्न सानोतिनो रोजगारीले सम्भावना छैन । कार खरिद गरेर चढ्न राम्रो जागिर र आर्थिक हैसियत बलियो हुनै पर्छ । आफ्नो कार हुनुलाई नेपालमा उसको इज्जत र प्रतिष्ठासँग जोडेर पनि हेर्ने गरिन्छ ।
के तपाईंलाई थाहा छ, इज्जत र प्रतिष्ठा मापनको विषय बन्दै गइरहेको कार चढ्ने नाममा तपाईं बिक्रेता कम्पनीबाट कतिसम्म ठगिनु भएको छ भन्ने कुरा ? जब तपाईंले यो वास्तविकता थाहा पाउनु हुन्छ, तपाईं तीन छक पर्ने मात्रै होइन, तपाईंले खरिद गरेको कारप्रति पनि तपाईंमा वितृष्णा आउन सक्छ । किनभने कार खरिद बिक्री गर्ने नाममा तपाईंले दुःख गरेर कमाएको पैसामा बिक्रेता कम्पनीले अत्याधिक लुट गरिरहेका छन् । कारको विशेषता बताउने नाममा बिक्रेता कम्पनीले प्रलोभनमा पारी कारको वास्तविक लागत मूल्यभन्दा ७५ प्रतिशतभन्दा पनि बढी मूल्य तपाईंसँग लिइरहेका छन् ।
बिक्रेताले कारको मूल्यभन्दा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी लिइरहेको कुरा तपाईं सहजै पत्याउनु हुन्न होला । तर, यथार्थ यही नै हो । यसका लागि हामीले तपाईंहरुलाई कार बिक्री गर्ने नाममा काठमाडौंको नक्सालस्थित लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टर प्रालिको ठगीधन्दाबारे जानकारी दिन खोजेका छौं । यो लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टरले दक्षिण कोरियाको विभिन्न थरीका कार बिक्री गर्ने गर्छ ।
कुन कारमा कति लुट मच्चाइएको छ यो तालिकाले पनि प्रष्ट पार्छ
सो इन्टरकन्टिनेन्टरले नेपालमा हुन्डाई कारहरु एओन इरा प्लस, इओन माज्ना प्लस, ग्रान्ड माज्ना प्लस, ग्रान्ड स्पोर्ट्ज, ग्रान्ड स्पोटर््ज, ओ एटी, ग्रान्ड अस्टा, क्रेटा एसएक्स प्लस, क्रेटा एसएक्स प्लस एटी, टक्सन जीएलएस लो ट्रिम एमटी, टक्सन जीएलएस लो ट्रिम एटी, टक्सन जीएलएस पीटी एटी हाई ट्रिमलगायतका कार बिक्री गर्दै आइरहेको छ । यी कारहरु कुनै पेट्रोल र कुनै डिजेलबाट चल्छन् ।
अब हामी तपाईंलाई हामीले लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टरले खरिद गरेको मूल्य, बिक्री गर्ने मूल्य र खाएको नाफाबारे सबिस्तार जानकारी दिने छौं । खरिद मूल्य भने हामीले गोप्य स्रोतबाट पाएका हौं । हालको बिक्री मूल्य विभिन्न सोरुमबाट लिएका हौं ।
पेट्रोलबाट चल्ने ८१४ सीसीको एओन इरा प्लस अहिले लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टरले १८ लाख ९६ हजार रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आइरहेको छ । जबकी यसको खरिद मूल्य १२ लाख ७६ हजार एक सय ६६ रुपैयाँ मात्रै हो । लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टरले यो कार बिक्री गर्दा प्रतिकार ६ लाख १९ हजार आठ सय ३४ रुपैयाँ फाइदा लिइरहेको छ ।
पेट्रोलबाट चल्ने ९९८ सीसीको एओन माज्नाा प्लस अहिले लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टरले २२ लाख ९६ हजार रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आइरहेको छ । जबकी यसको खरिद मूल्य १६ लाख ६३ हजार तीन सय १४ रुपैयाँ मात्रै हो । लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टरले यो कार बिक्री गर्दा प्रतिकार ६ लाख ३२ हजार ६ सय ८६ रुपैयाँ फाइदा लिइरहेको छ ।
यस्तै पेट्रोलबाट चल्ने ग्रान्ड माज्ना प्लस ११९७ सीसीलाई उसले १७ लाख ११ हजार एकसय आठ रुपैयाँमा खरिद गरेको हो । यसमा उसले ९ लाख ८४ हजार आठ सय ९२ रुपैयाँ नाफा खाएर २६ लाख ९६ हजार रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आइरहेको छ । ग्रान्ड माज्ना धेरै चलेको ब्रान्ड पनि हो । यही ब्रान्डमा लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले धेरै लुट मच्चाएको छ ।
लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टरले सबैभन्दा बढी नाफा खाएर बेच्ने गरेको कार टक्सन जीएलएस लो ट्रिम एटी हो । १९९५ सीसीको यो कार डिजेलबाट चल्छ । यो कारको खरिद मूल्य ७० लाख ३७ हजार पाँच सय ३६ रुपैयाँ मात्र हो । उसले यो कारलाई ९१ लाख ९६ हजार रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आइरहेको छ । यो कारमा उसले खरिद मूल्यभन्दा २१ लाख ५८ हजार चार सय ६४ रुपैयाँ बढी लिने गरेको छ ।
लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टरले सबैभन्दा बढी रुपैयाँ तिरेर खरिद गर्ने भनेको कार टक्सन जीएलएस पीटी एटी हाई ट्रिम हो । पेट्रोलबाट चल्ने १९९९ सीसीको यो कारको खरिद मूल्य ७३ लाख ३२ हजार चार सय ६६ रुपैयाँ मात्र हो । जबकी उसले यो कारमा १९ लाख ६३ हजार पाँच सय ३४ रुपैयाँ नाफा खाएर ९२ लाख ९६ हजार रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आइरहेको छ ।
माथि हामीले जुन खरिद मूल्य उल्लेख गरेका छौं, त्यो भनेको भन्सार छुट्ने बेलाको मूल्य हो । सबै कर तिरेर उसको लागेको मूल्य हो यो । कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ ले सामान्य अवस्थामा सयकडा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नहुने स्पष्ट पारेको छ । यसको अर्थ हो, लागतको २० प्रतिशतसम्म नाफा राखेर बेच्ने अधिकार बिक्रेतालाई हुन्छ । यसको अर्थ यो होइन कि, सोरुम, कर्मचारी खर्चलगायतमा लागेको खर्च छुट्टै लिने भन्ने । २० प्रतिशतभित्रै यसलाई अटाउनु पर्छ । यदि यो भन्दा बढी नाफा लिए कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ आकर्षित हुन्छ । सो ऐनको दफा ३ मा लेखिएको छ, ‘दफा २ अन्तर्गत मोल निर्धारण भएकोमा बाहेक नेपाल सरकारले तोकेको कुनै माल वस्तु व्यापार गर्ने व्यक्तिले माल वस्तु र व्यापारको प्रचलन अनुशार सामान्यत सयकडा २० भन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा वा अभावको लाभ उठाइ सो माल वस्तुको अनुचित नाफा लिइ बिक्री गरेमा निजलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै हुन सक्नेछ ।’
ऐनले डिलर, एजेन्टलाई मुनासिब कमिसन दिन रोकेको छैन । तर यदि डिलर, सब डिलर गरेर तीन तह बनाउने र सबैमा सयकडा २० प्रतिशत मुनाफा राख्ने हो भने कुनै पनि वस्तुको मूल्य स्वतः डेढ गुणाभन्दा महंगो पर्न जान्छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ भन्छन्, ‘भन्सार तिरेपछि कायम हुने मूल्यमा अधिकत् २० प्रतिशत नाफा राख्न पाइन्छ । तर व्यापारीहरुले त्यसरी मूल्य राख्दा त व्यापार चलाउन सक्दैनौं भन्ने गरेका छन् । सक्नु हुन्न भने उपभोक्ता लुट्ने व्यापार बन्द गर्नुस् भन्ने गरेका छौं ।’
तर, पनि फाट्टफुट्टबाहेक बढी मुनाफा लिनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको देखिँदैन । कारबाही गर्ने निकायलाई अगाडि नै सेटिङ मिलाएपछि यस्ता व्यापारी भए ठाउँ सरकारी अनुगमनको टोली पनि पुग्दैन । कतिपय उपभोक्तावादी संगठनहरुलाई यतातिर हेर्ने फुर्सद पनि छैन । आर्थिक हैसियत बलियो भएका उपभोक्ताबाट लुट्ने व्यवसाय भएका कारण यसलाई जनजीविकाको सवालसँग जोडेर पनि हेरिँदैन । जसका कारण उच्च मध्यम वर्ग लुटको सिकार बनिरहेको छ ।
हुन्डाइका कारमा भेटिएका यस्ता लुटका विषयमा लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका मालिक निराकार श्रेष्ठसँग सम्पर्क हुन सकेन । सम्पर्कमा आएका लक्ष्मीका सिनियर मार्केटिङ मेनेजर (ब्रान्ड) अवाशीष ओझा भने आफूलाई केही थाहा नभएको जस्तो गरी पन्छन खोज्छन्, । उनी भन्छन्, ‘कारको मूल्य कसरी निर्धारण गरिएको हुन्छ, त्यस्तो कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन । तर पनि मलाई थाहा भएअनुशार कारको मूल्यमा बाहिर नदेखिने किसिमका खर्च पनि जोडिन्छन् । जस्तो कि ढुवानी, भन्सार गोदाम शुल्क, पैठारीका क्रममा हुने ड्यामेज आदि ।’
(हुन्डाईको मात्रै होइन, अन्य कार कम्पनी र हिरो, बजाज, होन्डा, टीभीएसलगायत दुई पांग्रेको विवरण पनि नेपाल आजलाई प्राप्त भएको छ । यी सबैमा अत्याधिक नाफा राख्ने गरेको पाइएको छ । अटोमोबाइल्समा हुने कालोबजारीका बारेमा प्राप्त गोप्य दस्तावेजका आधारमा थप रिपोर्ट प्रकाशित गर्दै जाने छौं ।)
राष्ट्रपति बन्न कति मत आवश्यक ? हेर्नुहाेस् यस्ताे छ प्रावधान !
रणनीतिक समयमा परम्परागत शक्तिले गडबड गरेः अध्यक्ष दाहाल